हिमालसँगै हाँसेको, आहा पोखरा ! (फाेटाे फिचर) « Janata Samachar
प्रकाशित मिति : 11 February, 2019 11:15 am
पाेखरा । अधिकांश व्यक्ति बिदा हुँदा र नयाँ वर्ष आउँदा कहाँ जाने भनेर दोधारमा पर्ने गर्दछन् । पोखराको विभिन्न पर्यटकीय ठाउँको बारेमा चर्चा गर्दै छौं । सुन्दर हिमाल, विशाल ताल, गुफा, छाँगा र पर्यटकका लागि आकर्षक केन्द्र विन्दु पोखरालाई पर्यटनको राजधानी नै मान्ने गरिन्छ । विश्वको उत्कृष्ट पदयात्रा मध्य अन्नपूर्ण, पुनहिल, मुस्ताङ जाने प्रवेशद्वार पनि पोखरामा नै पर्दछ ।
पोखरामा घुम्नका लागि डुङ्गा चढेर फेवातालको सयर गर्दै तालको बिच भागमा रहेको सुन्दर तालबाराही मन्दिरको दर्शन गर्न सक्छौँ । त्यसपछि महेन्द्र गुफा, डेभिड फल्स, बेगनास ताल, विन्ध्यवासिनी मन्दिर, बुद्ध स्तुपा लगायत प्रशस्त ठाउँ छन् । यसका साथै पोखरा आसपासको धेरै सुन्दर ठाउँहरुले पनि मन पक्कै लोभ्याउँछ ।
हिमालको सुन्दर दृश्य हेर्नका लागि भने अलि अग्लो डाँडातिर उक्लनुपर्ने हुन्छ । अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे हिमशृंखला हेर्नका लागि सराङकोट उपयुक्त ठाउँ मानिन्छ । प्याराग्लाइडिङ, अल्ट्रालाईट, रक क्लाईम्बिङ, ¥याफ्टिङजस्ता साहसिक खेलको गन्तव्य पोखरामा अर्को साहसिक खेल पनि भित्रिएको छ । विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गरी जीप फ्लाएर डोरीमा झुण्डिएर खेलिने खेल यहाँ छ । यो खेल दक्षिण एसियामै पहिलो हो । पोखराबाट एक घण्टाको यात्रामा पुग्न सकिने धम्पुसबाट पनि आँखै अगाडि माछापुच्छ्रे हिमालको सुन्दर दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ ।
लामो दुरीको पदयात्रा गर्ने अधिकांश पर्यटकले रुचाउने म्याग्दीको पुनहिलको यात्रा पनि धेरै नै रोमाञ्चक हुन सक्छ । पोखराबाट पुनहिलको पदयात्रा गरेर पाँचौं दिनमा पोखरा फर्किन सकिन्छ । पहिलो दिन तिखेढुंगा, दोस्रो दिन घोरेपानी, तेस्रो दिन घोरपानीबाट सूर्योदयको दृश्य हेर्न पुनहिल टावर गएर फरि घोरेपानी, टाडापानी, घान्द्रुक हुँदै पाँचौं दिन पोखरा पुगिन्छ । पुनहिलबाट विश्वको सातौं अग्लो धौलागिरी हिमालको मनोरम दृश्य हेर्न सकिन्छ ।
नेपाल आउने विदेशी पर्यटकमध्ये २५ देखि ३० प्रतिशतले पोखरा भ्रमण गर्दछन् । नेपाल घुम्न आउने पर्यटकमध्ये ३३ प्रतिशत भारतीय छन् । तीनमा ३० प्रतिशत पोखरा आउँछन् । भारतीय पर्यटक सामान्यतया चितवन, पोखरा, मनकामना हुँदै प्रसिद्ध तीर्थस्थल मुक्तिनाथसम्म पुगेर फर्कन्छन् ।
कसरी पुग्न सकिन्छ त ?
काठमाडौंको कलंकीबाट सार्वजनिक बसमा ६ घण्टाको यात्रामा पोखरा पुग्न सकिन्छ । सोझै हवाई यात्रा पनि गर्न सकिन्छ । हवाई यात्रा गर्दा काठमाडौंबाट यती एअरलाइन्स र बुद्ध एअरबाट मात्र १५ सयमा जान सकिन्छ । बुद्ध र यतीले पोखराको विहानको पहिलो फ्लाइटको भाडादर १५ सय रुपैयाँ तोकेको छ । अरु समयमा काठमाडौं–पोखराको एकतर्फी भाडा ४२ सय रुपैयाँ छ ।